Ngrihet uma lokhu kwenzeka kuwe ngaphambili. Ubone isihloko esithakazelisayo kakhulu ku-Buzzfeed futhi unquma ukuhlola. Uma usuqedile ukufunda lesi sihloko, wanquma ukuthatha imibuzo lapho.
Ngaphambi kokuthi wazi, usuvele uchitha amahora lapho.
Yikuphi lokho okwenzekayo okwenzeka nje?
Yilokho amandla amawebhusayithi e-viral afana nawo I-Buzzfeed, Ukufaneleka, Futhi I-ViralNova. Impumelelo abaye bayifinyelela iphefumulele i-legion i blogerëve ezama ukubuyisela impumelelo efanayo kuwebhusayithi yabo.
Nansi into, okwenza iwebhusayithi ye-viral ephumelelayo njenge-Buzzfeed ingaphezu një kokuthumela ama-cool memes nama-gifs. Kuningi okungena kuwo, ukuqala ukhetha igama lesizinda elilungile kuya ku ukudala okuqukethwe okulungile futhi ukuthola izindlela zokwenza imali kuyo.
Kodwa, kungenzeka yini dala isayithi si Buzzfeed?
Kulungile. Eqinisweni, kulesi sihloko, sikubonisa indlela yokwakha isayithi le-viral njengo-Buzzfeed ku-WordPress kusukela ekuqaleni, yonke indlela eya ekupheleni kwezingqikithi ezifana nokwenza imali kanye nemithomana yezokh.
Uma usulungele ukuba yi-Buzzfeed elandelayo, funda ku-!